Jaaliyada UK oo dhambaal mahad celin ah u diraysaMadaxwaynaha DDSI Mudane Abdi Moxamuud Omarbooqashadii uu ku yimid UK - Cakaara News
Jaaliyada UK oo dhambaal mahad celin ah u diraysaMadaxwaynaha DDSI Mudane Abdi Moxamuud Omarbooqashadii uu ku yimid UK
London(CN) Sabti Feb01,2014.Jaaliyada UK oo dhambaal mahad celin ah u diraysaMadaxwaynaha DDSI Mudane Abdi Moxamuud Omarbooqashadii uu ku yimid UK. Anagoo ka amba qaadayna booqashadii taariikhiga ahayd eemaxadawaynaha dowlad deegaanka somalida Ethiopia uukuyimid cariga dalkan Britain Ayaan waxaan rabnaa hadii aannahay jaaliyada Somalida Ethiopia ee UK inaan mahadnaqbalaadhan usoo jeedino madaxwaynaha dawlad deegaankaSomalida Ethiopia Mudana Abdi Mohamud Cumar iyowaftigiisii balaadhnaa. Maxawayne Abdi waxaa uu la kulmay mudadii labadatodobaad kudhawayd dhamaan qaybaha kala gadisan eebulshada UK kunool eeka soo jeeda deegaanka SomalidaEthiopia.
Kulamada madaxwaynaha oo ahaa kuwo aad loosoo agaasimay ayaa waxay ku biloowdeen khudbado iyomacluumaad isdhaafsi kusaabsan maal gashiga dalkii hooyoiyo fursadaha maalgashi eey abuurtay dawlad deegaankaSomalida Ethiopia, kuwaas oo loogu talagalay in qurba joogtadunida dacaladeeda ku dhaqan ee deegaanka ka soo jeeda aymaal gashataan.
Kadib markii ay dhamaadeen kulamadii maalgashiga oosababay in shirkado waa wayn oo ay leeyihiin dad kasoo jeedadawlad deegaanka Somali Ethiopia iyo ajaniba, soobandhigeen doonitaankooda maalgashi, lana is dhaafsadayBusiness portfolioyadii iyo sharciyadii maalgashiga ayaawaxaa uu madaxwaynaha iyo waftigiisii ay u guda galeenkulamo dhaadeer oo uu madaxwaynuhu kula kulmay dadkakasoo jeeda sagaalka gobal ee uu ka koobanyahay deegaankaSomalid Ethiopia.
Sidoo kae Kulamadan oo ahaa kuwo ay aad oogu riyaaqday jaaliyadusida ay u dhaceen ayaa waxaa la isku waydaarsaday talooyin,xogwaraysi, mahad celin iyo balan qaad midnimo oo ayjaaliyada ku balan qaaday in ay taageero buuxda oo hiil iyohoo ah la garab taagantahay shacabka deegaanka somalidaEthiopia iyo dowladiisa horusocdka ah (progressive administration).
Dhanka kae Intii ay kulamada goosgooska ah dhacayeen ayaa waxaa si isdaba jog ah oogu soo dhacayay maamulka jaaliyada codsiyoka imaanayay xubno afar ah oo wali iyagu maqkhuursanaamawjadii harqatay ee nabadiidka gabalkiisa dhacay ee UBO. Xubnahan oo ahaa kuwa oogu firfircoon nabadiidkagabalkiisa dhacay ayaa waxay ka codsadeen madaxwaynaha,jaaliyada iyo shacabka deegaanka somaalida Ethiopia in aycafiyaan oo ay ka cafiyaan shaqadii ay qowlaysatadanabaddiidka UBO usoo qabteen intii ay ka mid ahaa yeen. M
adaxwaynaha oo sida caadada u ahayd habeen iyo maalin utaagnaa in uu badbadbaadiyo dadkiisa meel kasta ooyjoogaanaba ayaa aqbalay isasoo dhiibidii xubnahan oo afarahaa, tan oo dhalisay in ay kasoo qayb galaan kulankiigunaanadka ee casha sharafta sagootinta jaaliyada u samaysaymadaxwaynaha iyo waftigiisii. Waxaan ku gunaanadaynaa hadii aan nahay jaaliyadadeegaanka somalida Ethiopia ee UK in aan lagarb taaganahaydawlad deegaanka Somalida Ethiopia ee uu majaraha u hayoMadaxwayne Abdi Mahamud Omar hiil iyo hooba ugunahambalyaynaynaa guulaha is daba jooga ah ee xagahurumarka nabada iyo dawlad wanaaga ee ay dhaxalsiisayshacabka deegaanka Somalida Ethiopia sedex dii sane ee ugudambaysay.
Jaaliyada Deegaanka Somalida Ethiopia ee UK: Striving for Peace, Unity and Economic Development